Maxay tahay jawiga desktop ee aad ku isticmaasho Dacwadaha? Gnome ama Xfce? | Laga soo bilaabo Linux
Mar kasta oo aan daawado taxanaha telefishanka (gaar ahaan hadday tahay Mareykan), Si taxaddar leh ayaan u fiirsadaa Degaanada Desktop kuwaas oo ka muuqda muuqaalada uu kombuyuutar joogo.
Marar badan is-dhexgalka ka muuqda barnaamijka noocan ah waa lagu qosli karaa. Waxaan u maleynayaa inay "wax laga beddelay" ama "la allifay" si aan loogu soo bandhigin dhibaatooyinka xagga sharciga ah, laakiin ma hubo. Kuwa kale, tusaale ahaan, xusid ayaa laga sameeyay Nidaamka hawlgalka inay u isticmaalaan sidii kiiska The Big Bang Aragtida, halkaas oo in ka badan hal munaasabad lagu arkay KDE sida Deegaanka Desktop, iyo xitaa tiisa Sheldon Cooper Waan cadeeyaa taas Ubuntu waxay ahayd qaybinta uu ugu jeclaa.
Xilliyadan aan arkaayo Dacwadaha, taxane baahinaya Shabakadda Maraykanka iyo in aan aad uga helo madadaalo. Xaqiiqdu waxay tahay, in taxanahan, ay igu dhacday Deegaanka Desktop taas oo ka muuqata muuqaalo badan. Si isdaba joog ah sawirada lagu arkay kormeerayaasha waxay soo bandhigayaan isla daaqadaha iyo wixii la mid ah, laakiin aan eegno 3-da tusaala ee aan hoosta kugu tusinayo, si aan u aragno in qof awoodo inuu ii sheego waxa Deegaanka Desktop waxaa.
Garan maayo adiga, laakiin ma joojin karo ka fikirida waxa ay tahay Gnome 2 o Xfce (oo leh laba guddi sida Gnome 2). Ma arag deegaan kale oo Desktop ah oo isku qaab ah. Laakiin maxaa intaa ka sii badan, haddii aad eegto sawirkan, tuhunkeygu wuu sii kordhayaa:
Qofna ma ii sheegi karaa haddii shaashadda galitaanka ay cid kale leedahay Nidaamka hawlgalka? Waxay i siisaa hawo ah GDM o KDE naxdin leh.
Waxyaabaha xiisaha leh ee ku saabsan waxaas oo dhan ayaa ah in qisada silsiladdu ay ka dhacday gudaheeda shirkad caan ah oo sharci yaqaan ah. Maxay u isticmaali waayaan Windows ama ka fiican, OS X? Sida faallooyin dheeri ah waxaan jeclaan lahaa inaan ku daro: Miyaadan u fiirsan sida ku dhowaad dhammaan taxanaha TV-ga, dadka isticmaala kumbuyuutarka ay u isticmaalaan oo keliya kumbuyuutarka si ay ugu dhex wareegaan daaqadaha una maamulaan barnaamijyada? Haa, qaabka ugu nadiifsan "Tiling" ¬¬.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Muuqaal / Shakhsiyeyn » Maxay tahay jawiga desktop ee aad ku isticmaasho Dacwadaha? Gnome ama Xfce?
Dabeecad sida Sheldon Cooper waa qof si fiican ugu eegi lahaa Arch, ama Slackware.
Waxaan dareemayaa in Sheldon uusan fahmi doonin aragtiyadan.
Taxanaha kaliya ee aan daawanayo waa Socodka dhintay waxayna ilatahay aniga in zombiesyadu ay adeegsadaan Windows ... si dhab ah waxaan badanaa arkaa laptops-ka Mac ee taxanaha oo dhan, hadii ay jiraan wax lagu amaano shirkada tufaaxa waa sida ay u muujiyaan wax soo saarkooda .... waa hubaal inay arkeen tan, laakiin sida aan u qoslay markii ugu horreysay ee aan arko;
AAMUS OO LACAGTA II QAAD !!!!
Waxaan dhihi karaa waa Gnome 2 iyo GDM, ama ugu dambeyn waa maya waana sawiro fudud oo lagu soo qaaday kormeeraha.
u codee gnome2
Wakiil-adeegsi la cambaareeyay dist wixii distro ah ... laakiin aan ahayn ubuntu 😐
Hahaha dhamaadka LM waa Ubuntu 😛
Sawirka koowaad, waxaad ku arkaysaa astaanta astaanta qashinka ee gnome 2 (oo badanaa loo yaqaan "qashinka"). Oo ku xigta kan ayaa sidoo kale u muuqda inuu iftiiminayo astaanta maaraynta desktop-ka.
Waxay umuuqataa Gnome, gebi ahaanba, labada geesood - inkasta oo ficil ahaan faaruq yahay. XFCE sidoo kale waxay noqon kartaa, maadaama haddii aad si sax ah u qaabeysid aysan jirin faraq badan oo qurxin oo u dhexeeya midka iyo kan kale.
Sikastaba, taxanaha waxaad wax badan ka arki kartaa laptop-ka caadiga ah ee wata astaanta MAC, hadaad eegtana hard si dhib yar waligaa uma aragtid calaamadda! Waad u sheegi kartaa inay yihiin fiidiyowyo shaashad buuxda ah, haha.
Waxaan sidoo kale dhihi lahaa waa Gnome 2. Oo maxaa ku saabsan Sheldon Cooper waxaan u maleynayaa inay noqon doonto maxaa yeelay Ubuntu waxaa si fiican u yaqaana dadweynaha guud, hadii kale, sida @diazepan uu leeyahay, Archlinux ama xitaa Gentoo xDDD ayaa aad ugufiican iyada
Mararka qaar waxay gashadaan lacago ay qabtaan, marar kalena waxay si toos ah u ikhtiraacaan, waxaan u maleynayaa haddii aysan dhigin inay sabab u tahay Apple iyo Microsoft oo doonaya inay magdhow ka helaan xagga dhaqaalaha ama wax uun, anigu garan maayo, waa malahayga ..
Wixii aan ka ogaaday waa ka hor intaan qalabka Apple wax badan oo taxane ah u muuqan, filimo, laakiin hadda si dhib leh uma muuqdaan, waxay i siineysaa in Apple ay gacanta saartay sidaa darteed qalabkeeda aan si aad ah loo soo bandhigin.
Ku jawaab Kazehiri
Midkoodna ama waxay joojiyeen bixinta lacag soo saarayaasha filimka si ay u muujiyaan wax soo saarkooda. Tusaale ahaan waxaan xasuustaa filim Jabaaniis ah oo kaliya meesha ay ka muuqdeen gawaarida Opel, way iska cadahay in Opel ay bixisay, isla sidaas oo kale ayaa kula dhacda dadka kale oo dhan.
Waxa jira maamule kalfadhi oo la yidhaa SLIM oo ah mid aad loo habeyn karo oo noqon kara mid ka mid ah kuwa dambe oo aan la ogayn hubaal.
SLIM waan isticmaalaa waana wax fiican.
Waxay iigu egtahay Sabayon XFCE, oo aan hadda adeegsado laakiin leh hal bar oo keliya, iyo "MS WOS" xagga hoose. Gaar ahaan sababta oo ah midabka cawlan ee fayraska fayrasku wuxuu la mid yahay Thunar marka loo eego Nautilus, qaabkiisa asalka ah.
Marka lagu daro midabka buluuga ah ee khafiifka ah. d Xuquuqda sawirada hore ee XFCE.
Waxay noqon kartaa Xubuntu, maxaa yeelay ma adeegsado LightDM, wuxuu ku leeyahay baarka dusha sare, iyo hooseeyaha qeybta hoose.
Naxariista ayaa ah in haddii aysan isticmaalin MS WOS ama OSX ay sabab u tahay iyaga oo aan wax mushaar ah siinin, waxaana taas u sii dheer iyaga oo weli dacwad ku oogaya isticmaalkooda, laakiin iyagu fursad uma qaataan inay ku xayeysiiyaan waxa wanaagsan.
Sheldon Cooper wuxuu helaa gentoo, maxaa yeelay wuu dulqaad badan yahay, si uu ugu soo ururiyo wuxuu jecel yahay, halka kuwa kale ay u adeegsadaan Sabayon - horay loo sii diyaariyay gentoo -, gabdhaha caqliga badan ee Arch, iyo Ubuntu oo aan caqli badneyn. Laakiin maadaama aysan bixin, kama hadlaan waxyaabahaas.
Hagaag waxay sameeyeen cutub Siri wanaagsan. Taas oo aan u maleynayo in Apple ay maalgelin laheyd.
Waa hagaag, waxaan u maleynayaa inay tahay gnome, qashinku wuxuu u muuqdaa mid sax ah meeshii uu gnome ku socdo asal ahaan.
Inkasta oo qaabeynta qaarkood sida ay yiraahdeen ay sidoo kale noqon karto xfce.
Rafael Morales sawir-haye dijo
Haha waxaan dhihi karaa waa XFCE iyo mida ugu dambeysa ee laga yaabo inay tahay GDM, laakiin yaa garanaya, oo ku saabsan waxaad dhahdo oo kaliya in la sii wado codsiyada waxaa jira qeyb ka mid ah filimka loo yaqaan 'swordfish xD' haddii aad fiiriso daqiiqada 1.34 ee fiidiyowgaan ( http://www.youtube.com/watch?v=rjGbvpr_dB8 ) Waxaad arki doontaa inuusan qorin wax xD haha ​​kaliya riix khadka dhexe ee kumbuyuutarka haha ​​xD! wadarta guuldareysiga: D! salaan dhamaan
Jawaab Rafael Morales
Waxaan u maleynayaa in soosaarayaasha, qorayaasha qoraa ama cid kasta oo ay tahay in ay daryeesho faahfaahinta aragtida weyn ee bang way faafisay, in kasta oo la ogyahay in Sheldon uu dhaho "Ubuntu waxaad tihiin nidaamkeyga Linux ee aan Jeclahay" sheldon waxay isticmaashaa facebook, qof indheer garad ah ma isticmaali lahaa , sidoo kale cutub kale wuxuu sifiican ugu arkay "Alienware "kiisa IE (taasi waa sax) xitaa Firefox ama Chrome xitaa wuu shaqeeyaa: S
Waxaan sidoo kale arkay Leonard oo wata shaatiyadaha KDE iyo Sheldon oo ka hadlaya dib u rakibida nidaamkiisa Linux (Ubuntu) oo ah madadaalo hal habeen ah, laakiin markaa waxaan u maleynayaa in Internet Explorer lagu sheegay cutubyo badan ama nidaamka madaxa ee bog furahan la arkay. Ubuntu iyo KDE labadaba, waxaan rabaa inaan ka fikiro in loo magac daray inbadan maxaa yeelay iyagu waa ka caansan yihiin waxayna soo jiitaan fiiro gaar ah, taas oo aan filayo inay tahay ujeedada taxanaha telefishanka.
Waan jeclahay Linux laakiin waan gaboobayaa waxaanan aad iyo aad ugu sii daalayaa xagjirnimada ku wajahan nidaamka qalliinka (wax kastoo ay tahayba) iyo xiritaanka iyo cadaadiska lagu hayo inta hartay. Nidaamyada oo dhami waxay leeyihiin faa iidooyinkooda iyo khasaarahooda mana ka nixiyaan taas. Goorma ayaan soo afjaraynaa dagaaladaas?
Si aan u dhammeeyo, taas oo ah waxa aan u imid: Qof waxgarad ah sida dabeecadda Sheldon, oo aan ahayn indheer-garad ama feker - halkan waxaan u maleynayaa in lagu muujiyay khalad, imho-, maahan inuu isticmaalo ama joojiyo isticmaalka Facebook laakiin adeegsadayaal badan ayaa u adeegsada in lagu qasbay inay lahaadaan nooc astaan ​​gaar ah u ah isticmaaleyaasha kale ama shirkadaha kale, sida kuwa wax soo bandhiga; isticmaalkeeda sifiican ama si xun waxay kuxirantahay midkasta, sax?
midka ugu dambeeya wuxuu u egyahay KDM 🙂
Waan layaabay Sheldon wuxuu adeegsadaa Ubuntu. Miyaanay dhaheen waa "Linux dadka"?
Ku jawaab davijob
Ku kaydi faylashaada Qabri